Minecraft remoteconnect - https://aka.ms/remoteconnect (manamboatra) - Ahoana No
Minecraft dia iray amin'ireo lalao malaza indrindra amin'ny Internet. Mpampiasa Internet an-tapitrisany no milalao an'ity lohateny mahatalanjona ity. Ny endri-pifandraisana lavitra dia mety misy olana sasany. Raha sendra olana amin'ny fidirana ianao dia andramo ny fanamboaranay. Hiresaka amin'ny antsipiriany momba ny https://aka.ms/remoteconnect Microsoft Minecraft olana izahay. Tonga eo amin'ny efijeryo ny rohy diso rehefa misy lesoka fidirana.
Olana iraisan'ny rehetra ny olona niatrika indray mandeha, fara fahakeliny. Amin'ity toro-lalana ity dia miresaka amin'ny antsipiriany momba ny serivisy izahay.
Inona ny lesoka https //aka.ms/remoteconnect?
Ny lesoka 'https & aka-ms / remoteconnect' dia mahazatra rehefa manandrana ny kaontinao Microsoft ianao. Minecraft dia nifindra tany amin'ny sehatra Microsoft tato ho ato. Misy serivisy mahatalanjona taonina eo amin'ny lampihazo. Lalao tsara ho an'ireo mankafy fananganana entana io.
Ny lesoka dia matetika mitranga amin'ny PS4, Nintendo, ary ny console hafa. Azonao atao koa ny miatrika an'ity olana ity amin'ny solosainao. Amin'ity toro-lalana ity dia hiezaka ny hanamboatra azy amin'ny alàlan'ny vahaolana samihafa izahay.
NordVPN Netflix - Jereo any ivelany any Etazonia
Inona no mety hiteraka olana?
Misy antony vitsivitsy mety hiatrehanao an'ity olana ity. Ny sasany amin'ireo antony mahazatra indrindra dia ireto manaraka ireto.
1. Fanovana fitaovana
Minecraft dia manolotra serivisy amin'ny crossplay ho an'ireo mpampiasa azy. Midika izany fa afaka mampiasa kaonty iray amin'ireo sehatra rehetra ny mpampiasa. Ity dia fomba tsotra nefa mahomby amin'ny filalaovana amin'ny fitaovanao. Rehefa manova ny fitaovana ianao dia mety tsy hahomby. Ireo mpampiasa dia afaka miatrika olana amin'ny fidirany.Mety hipoaka ilay rindrambaiko ary hiteraka olana. Ny fanovana fitaovana no antony lehibe aorian'ity olana iraisana ity.
2. Angon-drakitra lalao maloto
Ny rakitra lalao dia mitana andraikitra lehibe amin'ny mpampiasa maro. Ny angon-drakitra lalao maloto dia hiteraka olana amina taonina anao. Mety ho olana amin'ny sehatra rehetra io.
Azonao atao ny manamarina ny karazana olan'ny data amin'ny alàlan'ny fitaovanao. Ho an'ireo mpampiasa PC dia mora ny manamboatra an'ity olana ity. Ny fametrahana indray dia mety ho fanamboarana haingana fa tsy mety amin'ny fotoana maharitra. Indraindray ireo rakitra tahiry dia mety ho simba ihany koa. Hiteraka olana vitsivitsy izany amin'ny fanokafana ireo sarintany fandrosoanao. Tsara ny maka backup mahazatra.
Ireo no antony roa lehibe mahatonga ny mpampiasa hiatrika ny olan'ny Microsoft Minecraft. Mety ho olana maharitra izany raha tsy ahitsinao avy hatrany. Tsotra be ho an'ny mpampiasa ny fizotrany.
Ahoana ny fanamboarana https //aka.ms/remoteconnect?
Amin'ity fizarana ity dia hijery ny fomba fanamboarana ny lesoka isika. Hanome anao vahaolana haingana sy mora ho an'ity olana ity ny mpitari-dalana anay. Ireto ny fomba samihafa hamahana ity olana ity.
1. Olana miampita
Ny fanamboarana ny olan'ny lalao crossplay dia tsotra. Azonao atao ny manaraka ireo dingana etsy ambany. Hanampy anao izy io hitondra traikefa filokana mahatalanjona. Ireto ny dingana hanombohana lalao crossplay mora amin'ny fitaovanao.
Ireo mpampiasa manana Minecraft amin'ny findainy Xbox dia afaka maka azy io amin'ny magazay ofisialy. Dingana lehibe iray hanombohana lalao amin'ny fitaovana samihafa. Ireo mpampiasa dia mila manana ny lalao Minecraft na amin'ny Xbox One na Xbox 360 mba hilalaovany amin'ny lalao lavitra.
Mba hahazoana ny kaody filalaovana lavitra, ny mpampiasa dia tokony hitsidika ity rohy manaraka ity - https://aka.ms/xboxsetup . Azonao atao ny manamarina azy amin'ny tranokala Xbox anao. Ny tranokala dia hampiseho ny kaody ho an'ny endri-dalao lavitra. Ny mpampiasa dia mila manana ny kaonty Microsoft miasa sy mandeha. Ireo mpampiasa dia mila miditra amin'ny kaontiny Microsoft maimaimpoana hampiasa an'ity tranonkala ity. Ilaina amin'ny Xbox izany.
Tena mora ny manomboka milalao lavitra amin'ny fitaovanao. Manoro hevitra ireo mpampiasa izahay hitsidika ity rohy manaraka ity - https://aka.ms/remoteconnect . Tsidiho ity rohy ity avy amin'ny fitaovana ampiasainao izay tianao hanandramana ny endri-dalao lavitra. Mila manana kaonty Microsoft ianao hiasa amin'ity endri-javatra mahavariana ity. Midira amin'ny kaonty maimaim-poana na mamorona kaonty vaovao.
Ireo mpampiasa dia tsy maintsy miditra ny kaody milalao lavitra, izay misy amin'ny efijery Xbox-nao. Ny tranokala dia hampiditra ny lalao Minecraft mivantana rehefa miditra ity kaody ity ianao.
Amazing! Ireo no dingana fiasa hiasa sy hampandehanana ilay endri-javatra lavitra. Manantena izahay fa io dia manamboatra ny olanao atrehin'ity tranonkala ity. Izy io dia miasa tanteraka amin'ny Microsoft Minecraft.
Ho an'ny PS4, ny dingana dia mijanona mitovitovy amin'ny fitaovana XBOX. Ireto ny dingana hamahana ny lesoka rehetra amin'ny sehatra.
Ny dingana voalohany ho an'ny mpampiasa dia ny manomboka amin'ny fitsidihana ny fivarotana PS4. Azonao atao ny manindry ny safidy fisintomana eto ary manomboka mampiasa azy. Sintomy ny lalao Minecraft amin'ny fitaovanao. Ny mpampiasa dia mila manana ny kinova fandoavam-bola, farafaharatsiny amin'ny fitaovana iray. Avy eo ianao vao afaka manandrana ireo fiasa milalao lavitra.
Ny kinova PS4 amin'ny lalao dia hanome anao safidy hampiasa amin'ny kaonty Microsoft. Tsindrio ity safidy ity ary midira amin'ny alàlan'ny mailakao sy ny teny miafinao. Raha vantany vao vita ny fizotrany dia azonao atao ny mahazo ireo angona fampifandraisana lavitra.
Afaka mamonjy mora ny kaody amin'ny PS4 ireo mpampiasa. Ilaina ny mihazakazaka ny endri-dalao lavitra. Amporisihinay izany ho an'ny olona rehetra izay te hilalao amin'ny fitaovana maro. Andramo amin'ny solosainao na ny findainao. Tsidiho ny tranokala mifandray lavitra mba hamahana ilay olana.
3. Tehirizo ny olan'ny rakitra
Ny olana amin'ny rakitra tahiry dia olana iraisan'ny mpampiasa console. Azonao atao ny mamaha ity olana ity amin'ny fitaovanao mora foana. Ireto ny torolàlana tokony hizahanao toetra.
Ny fikirakirana fitehirizana ao amin'ny fitaovanao dia hanome anao ny fampahalalana ilaina. Tsotra fotsiny izany ho an'ireo mpampiasa PS4. Mila mitsidika ny kisary gear ianao ary misafidy fitahirizana. Ho hita eo ireo rakitra tahiry. Tena mitovy amin'ny mpampiasa XBOX ihany koa.
Olana goavambe ho an'ny olona te hampiasa ilay endri-dalao lavitra ny rakitra raha tehirizina Azonao atao ny mamafa ireo rakitra ireo ary manomboka amin'ny rangotra. Mamporisika anao izahay hanana nomaniny ho solon'izay vonona ho an'ny mpampiasa izay efa vonona ny atiny.
Azonao atao ny manandrana mampiasa ny endri-pifandraisana lavitra aorian'ny fanesorana ireo rakitra tahiry. Izy io dia mety indrindra amin'ny filanao isan'andro.
Ny lesoka https://aka.ms/remoteconnect dia mahazatra an'ny mpampiasa maro. Manantena izahay fa afaka namaly ny fanontanianao rehetra ny lahatsoratray. Misy valiny samihafa amin'ny olana iraisana.
Ankehitriny ianao dia afaka mankafy mora foana ny lalao Minecraft na aiza na aiza. Ny fanamboarana dia miasa miaraka amin'ny fanontana Minecraft bedrock.
mijery sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana tsy misy alaina na fisoratana anarana
youtube mp3 mpanova kalitao avo lenta
fomba fampidinana maimaim-poana sarimihetsika vaovao
kaody lalao maimaim-poana xbox 360
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra mahazatra amin'ny Internet maimaim-poana